Nyowani Yevashanyi Kuchengetedza Midziyo yeMapurisa eSpain yeCamino de Santiago Pilgrimmage
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain Kuputsa Nhau » Nyowani Yevashanyi Kuchengetedza Midziyo yeMapurisa eSpain yeCamino de Santiago Pilgrimmage
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
by Mario Masciullo - Anokosha kuTN
rakanyorwa Mario Masciullo - Anokosha kuTN
Iyo Camino de Santiago, inozivikanwa muChirungu seNzira yeSt. Tsika inobata kuti zvisaririra zvemusande zvakavigwa pano.
"Protegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022" zvinoreva kuti, Tinodzivirira Nzira: Gore reJubheri 2021-2022.
Chirongwa chitsva chine chinangwa chekudzivirira Camino de Santiago kuitira kuti vafambi nevashanyi vafare nharaunda yakachengeteka.
Uye zvakare, uye sechinhu chitsva, mapurisa epasirese ari munzira anozovewo nzvimbo yepamutemo yekutsika zvitupa.
Director General weNational Police, Francisco Pardo Piqueras, akapa chirongwa ichi "Protegemos el Camino: Año Jubilar 2021-2022" iyo inotarisira kuvimbisa kuchengetedzeka kwevafambi vanofamba nhanho dzakasiyana dzeCamino de Santiago kuSpain.
Kubva kumahofisi eMapurisa eNyika, pachave nemapurisa akamira munzira anozoshanda senzvimbo yekufambidzana nemapilgrim uye vanozoshanda pamwe nemasangano nemasangano anobatanidzwa. Aya masitepisi achave nzvimbo dzepamutemo dzekuratidzira magwaro, chinodiwa chinodiwa kuti uwane "la Compostela" kana vapedza iyo Camino.
Iyo ruzivo uye izvo zvinhu zvinosanganisira QR kodhi yekukurumidza kuwana kune iyo nzvimbo yakatsaurirwa kune webhusaiti yeNational Police, ruware.es, kusimudzira Yakachengeteka makore eJacobean muSpain. Mariri, vafambi vanozowana matipi ekuchengetedza, iyo geolocation yekamba yemapurisa iri padyo, nzvimbo dzekutsika dzakarongedzwa nenzira, uye mukana wekutora kadhi rekutsika. Nhamba yekukurumidzira ndeye 091.
Mapurisa anobva kune dzimwe nyika, kunyanya vanobva kuGerman, France, Italy, nePortugal, vacharamba vachifamba-famba nenhengo dzeMapurisa eNyika kubatsira vafambi nevashanyi vekunze. Mabasa avo anozove, pakati pezvimwe, kuita mafambiro, kunyanya netsoka, asiwo mumotokari, kudzivirira utsotsi mumigwagwa yeruzhinji.
Vachaita zvakare kutaurirana nevagari vese uye, kunyanya, nevashanyi venyika yavo kuti vavabatsire pabasa rekushandura uye kuvabatsira nekuvatsigira muzvichemo. Mapurisa ekune dzimwe nyika achafamba achipfeka yunifomu yebasa ravo.
Mapurisa eNyika anopa mazano aya:
Mario Masciullo - Anokosha kuTN